पर्यटकको सत्कारका लागि कति तयार छ पोखरा ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ पर्यटकको सत्कारका लागि कति तयार छ पोखरा ?
पर्यटकको सत्कारका लागि कति तयार छ पोखरा ?
पोखरा, गण्डकी प्रदेशको राजधानीभन्दा बढी पर्यटकीय नगरी भनेर चिनिन्छ । यसको मुख्य कारण हो- प्रकृतिका अनुपम उपहारले सजिएको यसको भू-वनोट । पोखराका तालतलैया, हिमशृंखला, हावापानी सबै प्रिय लाग्छन् । प्राकृतिक तालतलैयाले भरिपूर्ण पोखराका सेती नदीको खोंचदेखि पातले छाँगोसम्मले रोमाञ्चित बनाउँछन् ।
पछिल्लाे - सवा ४ लाख भूकम्पपीडितले घर बनाए
अघिल्लाे - साउने सोमबारमा शिवभक्त (फोटो फिचर)